गुप्तेश्वर महादेव बहुमुखी क्याम्पसको नवनिर्मित भवन उद्घाटन – Shuva News
Shuvanews १ मंसिर २०७५, शनिबार November 17, 2018 190 Views
पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १७ मा रहेको गुप्तेश्वर महादेव बहुमुखी क्याम्पसको नवनिर्मित भवनको शनिबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी उद्घाटन भयो । भारत सरकारको आर्थिक तथा जिल्ला विकास समिति कास्कीको प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिएको सो भवनको नेपालका लागि भारतीय दुतावासका डेपुटी चिफ अफ मिसन डा. अजय कुमारले उद्घाटन गर्नुभएको हो ।
उहााले भारत सरकारले नेपालमा जलविद्युत, शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य लगायतका धेरै परियोजनाहरुमा कार्य गर्दै आएको र आगमि दिनमा पनि जारी रहने बताउनुभयो । सो अवसरमा राष्ट्रिय सभा सदस्य वृन्दा राना, गण्डकी प्रदेश सदस्य कृष्ण थापा, जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका अध्यक्ष बैनबहादुर क्षेत्री, स्थानीय समन्वय अधिकारी डिल्लिराम सिग्देल, पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १७ का वडा अध्यक्ष तिर्थराज अधिकारी लगायतले नेपालको विकासमा भारत सरकार योगदान रहेको वताएका थिए ।
क्याम्पस प्रमुख धर्मराज वरालले क्याम्पस भवन निर्माण तथा शैक्षिक गतिविधिहरुको वारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । ४ करोड १० लाख ७१ हजार छ सय १९ रुपैयाँमा २१ कोठा भएको भवन निर्माण गरिएको हो । कार्यक्रममा छात्रछात्राले नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए भने पञ्चेवाजा वजाएर अतिथिहरुको स्वागत गरिएको थियो ।